Asehon’ny filma makedoniana iray nivoaka taompolo 1990s ny aloky ny taona 2019 anjakan’ny fankahalam-bahiny · Global Voices teny Malagasy
Nosainin'ity filma ity ho tanihay post-apokalyptika ny taona ankehitriny
Voadika ny 17 Desambra 2019 10:59 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Shqip, Español, Français, українська, русский, Italiano, English
Sehatra avy amin'ny filma “Goodbye 20th Century” (1998). Sary fampahafantarana avy amin'ny iditra IMDB, ampiasaina araka ny tokony ho izy.
Amin'ny maha-taona mialoha ny 2020 azy, dia daty malaza ho taona hanaovan'ireo mpamorona ny filma sci-fi ny taona 2019. Nandritra ity taona ity isika namaky lahatsoratra anjatony (tahaka ity iray ity, sy ity iray ity) nampahatsiahy antsika ireo filma efa hain'ny besinimaro tahaka ny Blade Runner (1982), The Running Man (1987) ary Akira (1988) izay napetraka amin'ny endriky ny taona ankehitriny, ary manombana ny fahaiza-mitsatok'ireo faminaniana (fiara efa manidina, olombelona clones, Ady lehibe fahatelo) ataon-dry zareo.
Saingy vitsy amin'ireo tantara ireo no nanonona ilay filma iray tsy dia fantatra antsoina hoe “Goodbye, 20th Century!,” izay famokarana Makedoniana nivoaka tamin'ny taona 1998 izay nampidirin'ny firenena hifaninana hahazo ny Oscars tamin'izany taona izany (tsy nahazo ny hotendrena ho Sarimihetsika amin'ny teny vahiny tsara indrindra izy).
Soritan'ny tantaran'i Kuzman ny fiantraikany mampihoronkoditra amin'ny fiakaran'ny fihetseham-po nasionalista — lohahevitra izay mbola mihalohalo hatrany ao amin'ny faritra 20 taona taorian'ny ady Yogoslavy — ahitana ireo hiakia-pahadalàna iraisana alohan'ny idirana ny taona 2000 sy tondro ara-baiboly.
Tsy niray feo loatra ireo mpanao tamberina ny filma tany Etazonia ary fotoana fohy dia fohy ihany no nandehanany tany amin'ny sinema ivelan'i Makedonia Avaratra. Tamin'izany fotoana izany, mpanao tsikera vitsy avy ao Etazonia no mahita ilay filma ho “bizarre” [hafahafa] noho ireo herisetra maina fotsiny amin'izao sy ireo fanehoana fananahana miharihary (Nisy fotoana ilay lahy arahintsika niray tamin'ny anabaviny tao anaty lakam-pandroana feno paoma). Heverina ho “manjavozavo sy saro-pantarina” ilay tantara ahitana fizarana telo saria maro loatra ireo fanondroana tokotanin-tsehatra maizina dia maizina ho an'ireo mpijery tsy-Makedoniana. Ny hafa mankatoa fa mety ho taratry ny rivotry ny fahadisoam-panantenana, faharavana, ary fahaverezan-tsaina mihatra amin'ny faritra tamin'izany fotoana io. Mpanao tsikera iray hafa niteny ilay sarimihetsika “tahaka ny nataon'ny adolantsento roa 13 taona lasa aloha loatra ara-tsaina feo loatra faniriana hanao firaisana amin'olompady ary mameno ny lohany ny bala ary ny fiparitahan'ny rà.”.